Ọnọdụ obibi ụlọ nkwari akụ Moscow kachasị elu na Europe
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ọnọdụ obibi ụlọ nkwari akụ Moscow kachasị elu na Europe
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ikike nke ndị mmadụ ịkwaga n'enweghị ihe mgbochi n'ime mba ahụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ibupụ ihe mgbochi nyere ohere ka ụlọ ahịa ụlọ nkwari akụ Moscow nwetaghachi ngwa ngwa karịa isi obodo Europe.
Moscow họọrọ otu na Europe n'ihe banyere ọnụego ndị bi na họtel
Na Istanbul, nke toro ogo otu ọnwa gara aga, ọnụego ụlọ nkwari akụ gbadara na 37.3%
Na Disemba, ọnụ ọgụgụ ndị bi na họtel nke Moscow rịgoro na 43.3%, nke karịrị ihe karịrị 1.5 oge karịa nke Turkey na obodo kachasị ukwuu.
Obodo 39% jupụtara na họtel Moscow na Nọvemba 2020 na-enye isi obodo Russia kachasị elu na ọkwa European, dị ka akụkọ ụlọ ọrụ Cushman & Wakefield na-agba izu na-ekwu.
Ejiri Istanbul na Turkey buru uzo buru ibu otu onwa na mbu, mana onu ogugu nke ndi ulo oriri ya ruru 37.3% na November. Na Disemba, ọnụ ọgụgụ ndị bi na họtel nke Moscow rịgoro na 43.3%, nke karịrị ihe karịrị 1.5 oge karịa nke Turkey na obodo kachasị ukwuu. N'ime ọnwa mbụ nke 2021, ọnụ ọgụgụ a na Moscow fọrọ nke nta ka ọ ghara ịgbanwe na 43.6%.
Ihe nyocha nke Cushman & Wakefield na Moscow kwadoro site na ndị ndụmọdụ ndị ọzọ, yana ndị ọbịa ụlọ oriri na ọ .ụ hotụ. Onye nnọchi anya ụlọ ọrụ ahụ kwuru na Europe enwebeghị mmeri ọzọ COVID-19, bụ nke butere mgbochi nke ndị mmadụ na mmechi nke akụrụngwa akụrụngwa, gụnyere hotels.
Agbanyeghị, ụlọ oriri na ọ hotelsụ Moscowụ Moscow na-eji nwayọọ nwayọọ enweta uru ha furu efu n'ihi mbelata nke ọnụego ụlọ. Ọnụ ụlọ dị na ụfọdụ ụlọ nkwari akụ Moscow dara na mbụ site na 30-40%.